Ny onjan'ny baomba any Suède dia mitohy miaraka amin'ny fipoahana ao Stockholm sy Uppsala
Home » Fampihorohoroana sy heloka bevava ho an'ny mpandeha: » Ny onjan'ny baomba any Suède dia mitohy miaraka amin'ny fipoahana any Stockholm sy Uppsala
Ny onjan'ny baomba any Suède dia mitohy miaraka amin'ny fipoahana any Stockholm sy Uppsala
Ny fipoahana dia an'i Stockholm sy Uppsala
Nisy fipoahana mahery vaika nanetsiketsitra ny afovoan-tampony Stockholm ny manodidina ny alatsinainy maraina, mamaky varavarankely ary manarona zaridaina fitaratra miaraka amin'ny veritra fitaratra Östermalm iray manontolo.
Ny feo nipoaka, izay nanimba tanteraka ny fiara iray, nanimba ny maro hafa ary nanapoaka ny varavarankely nivoaka tamin'ireo trano nanerana ny arabe iray manontolo, dia re hatrany amin'ny kilometatra maromaro.
Fitaovam-baomba iray no voalaza fa napetraka teo am-bavahady ivelan'ny trano iray tao an-toerana tamin'ny 1 ora maraina teo ho eo.
Tsy nisy ny naratra tamin'io tranga io, fa mponina 30 no nafindra avy hatrany ho fitandremana ary nandany ny alina tany amin'ny toeram-ponenana vonjy maika tao amin'ny sekoly iray teo an-toerana.
“Mino izahay fa tao amin'ny tranobe na tamin'ny tranobe no nitrangan'ny fipoahana, saingy mbola aiza ny toerana mbola tsy mazava. Misy fiara simba eo akaiky eo, saingy mety tsy nitranga tao anatiny ny fipoahana, ”hoy i Mats Eriksson, mpitondra tenin'ny polisy ao Stockholm, ny alatsinainy teo.
Tohatra iray voalaza fa simba be, izay mety nahatonga ny fivoahana mitohy. Ho fanampin'izay, nisy varavarana iray notsofina tamin'ny alàlan'ny herin'ny fipoahana, izay namoaka ampahany lehibe tamin'ny lavarangana trano.
Ny ekipa baomba soedoà koa dia nalefa tany an-toerana mba hanombohana ny fanadihadian'izy ireo ny toe-javatra nipoaka. Na izany aza, roa ora monja taorian'ny fipoahana tao Stockholm dia nisy fipoahana hafa nampiahiahy ihany koa voalaza tao amin'ny tanànan'ny oniversiten'i Uppsala, adiny iray eo ho eo miala eo.
Ary indray, tranobe iray sy fiara maromaro no simba tamin'ny fipoahana saingy tsy nisy ny tatitra naratra. Tsy nilaza ny polisy raha mifandray ireo fipoahana ireo.
SoedaSahirana ny tompon'andraikitra amin'ny famerana ny baomba nipoaka nanakorontana ny firenena tato anatin'ny volana vitsivitsy na dia teo aza ny fananganana vondron'olona miasa manokana.
Seranam-piaramanidina Munich: taom-pilalaovana faha-10 nifanesy
Lufthansa Group Airlines: mpandeha 145 tapitrisa amin'ny 2019